स्थानीय खबर | Indrenionline.com | Page 5
वाम गठवन्धनका उम्मेदवार जिताउन टोल–टोलमा कार्यकर्ता परिचालन
देउखुरी, २४ कात्र्तिक । संयुक्त निर्वाचन परिचालन समिति दाङ क्षेत्र नं. १ को आयोजनामा लमही नगरपालिकाको वडा नं. १ र २ मा वडा स्तरीय संयुक्त भेला आज सम्पन्न भएको छ । वाम गठवन्धनका साझा उम्मेदवारलाई विजय वनाउन टोल–टोलमा परिचालन हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइएको छ । वडा नं. १ का संयुक्त निर्वाचन परिचालन कमिटिका अध्यक्ष नुमराज पौडेलको अध्यक्षता एवम् नेकपा एमालेका ...
दाङ च्याउ उत्पादनमा आन्मनिर्भर बन्दै
दाङ, २४ कार्तिक । दाङ च्याउमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । जिल्लामा गएको आर्थिक वर्षमा करिव ७२ लाख १४ हजारको च्याउ उत्पादन भएको र त्यो जिल्लाभित्रै खपत भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङले बताएको छ । यो सँगै दाङ च्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वाली संरक्षण अधिकृत पिताम्वर वस्नेतले बताए । ‘पछिल्लो समयमा दाङका कृषिकहरु व्यवसायिक च्याउ ...
कांग्रेसको गाँउकेन्द्रित चुनावी अभियान
दाङ, २४ कार्तिक । आगामी मंसीर २१ गते हुने प्रतिनीधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि काग्रेस दाङले चुनावी कार्यक्रम तीवं्र रुपमा गाँउकेन्द्रित गरेको छ । जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रका उमेद्वारहरु चुनावी प्रचार कार्यक्रम अन्तरगत गाँउगाँउमा पुगेर मतदाताहरुसँग मत माग्नमा व्यस्त रहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधीसभा सदस्यका उमेद्वार सुशीला चौधरी, २ का उमेद्वार राजु खनाल र ...
परिवार नियोजन संघ नवलपरासीद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मानित
इन्द्रेणी संवाददाता परासी, २४ कर्तिक । नेपाल परिवार नियोजन संघ नवलपरासी शाखाले जिल्लाका नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्मान गरेको छ । शाखाले आज आयोजना गरेको श्रोत परिचालन सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न स्थानिय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र वार्ड अध्यक्षहरुलाई दोसल्ला लगाई सम्मान गरेको हो । विगत ३० वर्षदेखि नवलपरासी जिल्लामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यस संस्थाले आफनो ...
भन्ने मात्रै होइन गरेर देखाउदैछु : डाँगी
बिजौरी, २३ कार्तिक । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश ‘ख’ का संयुक्त बाम गठबन्धनका उम्मेदवार अमर डाँगीले जनताहरुलाई गलत आश्वासनभन्दा आफूले निर्वाचन जितेपछि व्यवहारमै काम सिद्व गरको बताएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९को दुर्गम क्षेत्र भित्री सक्राम घरदैलो अभियानका क्रममा वडावासीहरुलाई आफ्नो विगतको क्रियाकलाप हेरेर मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए । डाँगीले भने,‘मैले स्वर्गद्वारीसम्म सडक पु¥याउन अघि सर्दा ...
माओवादी केन्द्र दाङका सल्लाहकार घिमिरेको निधन
दाङ, २३ कार्तिक । नेकपा माओवादी केन्द्र दाङका सल्लाहकार एवं दाङका अग्रज कम्युनिष्ट नेता फनिन्द्र घिमिरेको निधन भएको छ । केही समय पहिलेदेखि क्यान्सरबाट पीडित घिमिरेको बिहीबार दिउँसो घोराही–१७ बर्गदी घरमै निधन भएको हो । २०१३ सालमा जन्मिनुभएका घिमिरे शिक्षण पेसाबाट निवृत्त भइसकेपछि राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा रहदै आएका थिए । जनयुद्धको शुरुवाती समयमा केही महिना जेल जीवनसमेत ब्यहोर्नुभएका उनी आजीवन ...
स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको निर्माणाधीन भवन अवलोकन गर्न पुगे उपप्रधानमन्त्री महरा
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, २३ कार्तिक । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको नवनिर्मित भवनको प्रगती विवरण हेर्न आज अस्पताल परिसरमा पुगेका छन् । आफू अर्थमन्त्री हुँंदा उनैको पहलमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठानको मान्यता पाएर शुरु भएको भवनको प्रगती के कति भएछ भनेर उनी त्यहाँ पुगेका हुन् । महराले प्रतिष्ठान संचालनका लागि आवश्यक पर्ने ३०० शैयाको अस्पतालका लागि अर्थमन्त्री ...
छोरी बलात्कार गर्ने बाबु प्रहरी खोरमा
दाङ, २३ कार्तिक । दाङमा आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गर्ने एक जना पक्राउ परेका छन् । बंगालाचुली गाउँपालिका वडा नं ५ साकिनेका भीमबहादुर गिरीलाई झट्केली (श्रीमतीसँगै ल्याएको) छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। १४ वर्षीया झट्केली छोरीलाई डर धम्की देखाइ बलात्कार गर्दै आएको उजुरी परेपछि ३२ वर्षीय लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
पशुपालनमा पौने २६ लाख लगानी गरिदै
शंकर केसी दाङ, २३ कार्तिक । पशुपालन सम्बन्धी एकदिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम बुधबार दाङ शान्तिनगरको चिराघाटमा सम्पन्न भएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिका अन्तर्गत पशुस्वास्थ्य शाखाले अभिमुखिकरणको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा उपस्थीत किसान तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाइ यस आर्थीक वर्षमा गाउँपालिकाले पशुपालनको क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट, कार्यक्रम र सेवा सुविधाका बारेमा अभिमुखिकरण गरिएको पशुस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख देवराज आचार्यले बताएका छन् । उनले यस ...
कांग्रेसका उम्मेदवार गाँउगाँउमा
दाङ, २३ कार्तिक । आगामी मंसीर २१ गते हुने प्रतिनीधी सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा चुनावी अभियान तीव्र बनाएको छ । प्रतिनीधी सभा एवं प्रदेश सभाका उमेद्वारहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी कार्यक्रम अन्तरगत अगुवा कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त छन् । गाँउगाँउमा पुगेर चुनावी प्रचारप्रसारस्ँगै अगुवा नेता कार्यकर्ता भेटघाट गरिरहेका यस क्षेत्रका ...